Iifowuni zoHlola ™ -Ukuphononongwa ngokuzimeleyo kweefowuni ezihloliweyo yingcali uJeff Tinklet
Ndiqinisekile wonke umntu uyazibuza ukuba yeyiphi isoftware yeselfowni yokuyithenga?
Silungiselele uluhlu- Iintlola ezi-4 eziPhambili zeefowuni
Iifowuni zokuhlola ziyacebisa FlexiSPY as ISICOMBULULO SEFONI ESIPHAKAMILEYO Ngo-2020! Inamandla onke kwisisombululo esinye sokujonga. Ithegi yentengo iphezulu kancinci kodwa kwelinye icala, inazo zonke izinto eziphambili ze-spy, inokuthenjwa, abasebenzi abaxhasa abathengi balungile kwaye nakuhlelo olugqithisileyo, ubonelelwe ngeapp ye-password cracker.
Inqaku elitsha lenkonzo yokufaka ekude kubathengi bethu.
Ngoku ungabhukisha iseshoni ekude kunye negcisa elinamava, oya kuthi ingcambu / ukuqhekeka kwejele isixhobo ekujoliswe kuso kunye fakela FlexiSPY yakho.
Jonga eyam UPHONONONGO LWEFLEXI.
QALA UKUHLOLA NGOKU -> ISICWANGCISO ESIPHAKAMILEYO FlexiSPY
mSpy kutshanje ihlaziye software yayo. Ngoku kungcono ukuba uhlolisise umnxeba ongafuneki ukuba uqhubeke kwaye ungalandela i-iPhone ngaphandle kokufaka usetyenziso kwiselfowuni. KUCetyiswa ukuba akukho Sisombululo seJailbreak.
Jonga eyam UKUPHONONONGWA KWE-MSPY.
QALA UKUHLOLA NGOKU -> AKUKHO SOLUTION SIPHUMELELO
3. Highster Iselfowuni
I-Highster Mobile Spy yenye yezona software zithengisa kakhulu, kuba wawusoloko ufumana amanqaku amaninzi kunye nexabiso eliphantsi. Kwakungekho nenye i-app ye-spy kwimarike ekubonelela ngendlela engabizi kakhulu yokuhlola umntu onempawu ezinje. Kwakhona, yayingabonakali kwaye kulula kakhulu ukuyifaka. Olunye uncedo yayikukuba ilayisensi yayilixesha lokuphila ngoko ke kwakungekho rhumo lwenyanga!
Ngelishwa I-SPY EPHAKAMILEYO I-MOBILE SPY IBENZE IINGXAKI EZITHILE, kwaye ASISEBENZI.
Ngoku sicebisa mSpy njenge yesibini ngexabiso eliphantsi, ukusebenza ngokugqwesileyo, kunye nomgangatho ophezulu.
EYAHLUKILEYO -> UKUTSHINTSHA OKUTSHINTSHILEYO mSpy
4. Ifowuni yeSpyera
Ifowuni yeSpyera sisoftware eyenziwe ngokuqokelela amava. Bahlala behlaziya i-app yabo yokuhlola kwaye namhlanje banesoftware yokuhlola. Ngakolunye uhlangothi, le app iyabiza kakhulu kwinto oyifumanayo. Nangona kunjalo, i-Spyera spy app izinzile kwaye ukuphononongwa kwabathengi kuhlala kulungile. Ke ukuba ukhetha le software ye-spy awuyi kuzisola. Kwakhona, qaphela! Iifowuni zihlola ukukunika ikhuphoni yeSaphulelo seSpyera ukuya kuthi ga kwi-30%.
QALA UKUHLOLA NGOKU -> ISISOMBULULO SOMGANGATHO Spyera Ifowuni
Kwaye eyona software yethu yokuthenga BHAYIBHILE YOKUGQIBELA…
The UKUTHENGA KAKHULU isoftware yokuhlola iya kuba mSpy, ngenxa yexabiso layo kunye neendawo zokuhlola. Olunye uhlobo lwesoftware yokuhlola iya kuba yi-Highster Mobile.
The EKWALE YAPHEZULU kunye ISISOMBULULO SOKUGCINA UHLOLO iza Kubayi FlexiSPY ngokuqinisekileyo yenye yeenkqubo zokulandela umkhondo ezihambele phambili kwintengiso. Isoftware yokuhlola inika onke amanqaku afunekayo kuhlolo lobungcali kwaye ikwabonelele ngegcisa, eliza kuncothula / ukujolisa kwintolongo yesixhobo ekujolise kuso kwaye sikufakele iFlexiSPY.
Malunga nam - umbhali
Igama lam ndinguJeff Tinklet kwaye ndingumphathi womxholo okhokelayo kunye nommeli wenkxaso kubathengi kwiiFowuni zokuHlola. Ngokusisiseko, ndiqhuba inqanawa, ndithatha isigqibo sokuba zeziphi iindaba ekufuneka ndizigubungele, kunye nendlela yokuzigubungela.
Ndikhulele eWyoming, kwaye nangona ndihlala eNew York ngoku, intliziyo yam ikwiiHighlands.
Bacinga ntoni abathengi bethu?
"Onke amadoda ayafana. Ukukopela abantwana abangamakhwenkwe. Ndikunye neFlexiSPY ndafumanisa ukuba wayethandana notombazana omnye kodwa amabini. Awungekhe ucinge indlela endothuke ngayo. Ilizwe lam lityumke ngemizuzwana. Andinakuvumela oku ukuba kwenzeke kwakhona. Ukusukela ngoku ndiza kuhlala ndisebenzisa le software ukuba ndihlole amakhwenkwe am. Akufanelekanga ukuba athenjwe. Enkosi phonespy.com. "
"Ndithenge i-Highster Mobile. Isoftware enkulu. Ngeentsuku ezi-4 ndiqinisekisile ukungathandabuzeki kwam. Kwakubuhlungu kodwa kungcono ngoku kunangeminyaka eli-10. Ndikunye nalo mfazi ndacwangcisa ikamva lam. Ndaye ndacinga ukuba abantwana bethu bazakubonakala njani. Ndinqwenela ukuba ndiyithengile le nto isoftware ngaphambili. Enkosi ngefowuni, Phawula. "
"Ayothusi into yokuba iingxelo zakhe zazimbi, zimfutshane kwaye zingasebenzi. Uchithe ixesha elininzi ejonga kwiwebhu kwi-iPhone yakhe. Ndonwabile ndathenga isoftware yefowuni. Ndamgxotha ngoko nangoko. Emva kokumbonisa ubungqina uyavuma ukungahlawuli imali. Ndigcinile imali eninzi ngale software. "
Sivavanya usetyenziso lweefowuni kwaye sikunika Ukubuyiselwa kwakhona kwamahhala kunye nezikhokelo.
Saqala ukunceda abaphulaphuli bethu kwi 2012.
Ukuba ufumene izikhokelo zethu zixabisekile, nceda usincede sihlale siphila ngokuthenga usetyenziso ngekhonkco lethu lokudibana.
FlexiSPY uphononongo kunye noHlelo lwe-2022-Iinkonzo, iNgxaki kunye nesigqibo
Uphengululo lweMSpy kunye noHlelo lwe-2022-Iinkonzo, iNgxaki, ukujonga ngokubanzi
Ukuphononongwa okuphezulu kweselfowuni kunye nokuBekwa kweNqanaba le-2022-Iinkonzo, iNgxelo kunye nesigqibo
Uphengululo lweSpyera 2022 - Spyera uphononongo lwabathengi- Ngaba luyasebenza?
UkuGqibela koPhononongo lweWin-Indlela yokujonga kwakhona ukujonga iPC!
© Iifowuni zokuhlola | Ikhaya | Imiqathango yeNkonzo | umthetho wabucala | Iinkcukacha zoqhagamshelwano | Ishishini lokuthengisa
Le webhusayithi isebenzisa ikuki ukuphucula amava akho. Ungakhetha ukuphuma xa unqwenela. Unokuthintela ikuki kwisikhangeli sakho. Nantsi indlela. Siphononongwa ngobuchule kunye novavanyo lwewebhusayithi. Ukuba uthenga emva kokucofa kwikhonkco lethu lokudibana siza kufumana utyelelo oluncinci, kwaye luyakusinceda ukuhlawula iindleko zemihla ngemihla kwaye siqhubeke nokukunceda NGOKUGQIBELELEYO esinako, ke kwimeko enjalo, enkosi, Jeff!
Yamkela Funda Okuninzi